ဘာ ပြနာများ လိုအပ်တယ် ရန် ဖြစ်လိမ့်မည် ပေးဆောင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရန် ဘယ်တော့လဲ ထည့်သွင်း က အင်ဂျင် ပရိသ ဖြစ်စဉ်ကို? - ကွမ်ကျိုး CHEJU အပို အစိတ်အပိုင်းများ Co. , Ltd.
ဘာ ပြနာများ လိုအပ်တယ် ရန် ဖြစ်လိမ့်မည် ပေးဆောင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရန် ဘယ်တော့လဲ ထည့်သွင်း က အင်ဂျင် ပရိသ ဖြစ်စဉ်ကို?
1. အားလုံးစုဝေးအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုန်, burrs နှင့်လက်မခံနိုင်အစိတ်အပိုင်းများမှကင်းစင်သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
3. ရှင်းလင်းရေးအစိတ်အပိုင်းကိုလည်ပတ်နေသောအင်ဂျင်အတွက်၊ တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းစည်းမျဉ်းများအရစစ်ဆေးသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါက၊ အစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးရန်သို့မဟုတ်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပြီးအလွန်အကျွံကွာဟမှုကိုခွင့်မပြုပါ။
အင်ဂျင်ထဲသို့တင်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောလက်ကိုင်ဝက်ဝံများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောချောင်းများ၊ ပစ္စတင်စသည်တို့အတွက်၎င်းတို့ကိုမူလနေရာတွင်အစားထိုးရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့အစားထိုးခံရပါက၎င်းတို့ကိုအုပ်စုများဖြင့်အစားထိုး။ အစားထိုး။ မရပါ။
6. အင်ဂျင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင် gaskets နှင့် gaskets များအားစုစည်းသောအခါအစားထိုးသင့်သည်။
အင်ဂျင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ၇။O-ring တံဆိပ်နှင့်ရိုးတံဆီတံဆိပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းပညာအခြေအနေတွင်ရှိရမည်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးသင့်သည်။
၈။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအတန်း၏တံဆိပ်ကိုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။ ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအရည်အသွေးကိုထိခိုက်စေရန်ကော်အားဆီဖြင့်အစားထိုးခွင့်မပြုပါ။
အင်ဂျင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်စွဲစေသည့် torque ၏တင်းကျပ်သော torque သည်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီတိကျစွာလိုက်နာပြီး torque wrench ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ခံစားမှုအားဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်စေ၊ အလွန်လိမ်လိမ်လွန်း။ လိမ်လွန်း။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အချက်များမဖြစ်စေရ။
ဘာ ဖြစ်ကြသည် က ကား ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ
လိပ်စာ: 44th ကြမ်းပြင်, အဆောက်အ ဦး ၁၄, Jinyongfu အော်တို အစိတ်အပိုင်းများ မြို့တော် ယုယု ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး မြို့တော် ဂွမ်ဒေါင်း ပြည်နယ်, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13826028003
အကောင်းဆုံးသော၊ ပြည့်စုံသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလမ်းတိုင်း၌ပေးသည်။ သင်မမှာယူမီ၊ အချိန်မှီစုံစမ်းခြင်းဖြင့် ...
ဘာ ပြနာများ လိုအပ်တယ် ရန် ဖြစ်လိမ့်မည် ပေးဆောင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရန် ဘယ်တော့လဲ ထည့်သွင်း က အင်ဂျင် ပရိသ ဖြစ်စဉ်ကို?2019/08/21
ဘာ ပြနာများ လိုအပ်တယ် ရန် ဖြစ်လိမ့်မည် ပေးဆောင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရန် ဘယ်တော့လဲ ထည့်သွင်း က အင်ဂျင် ပရိသ ဖြစ်စဉ်ကို? ၁ စုဝေး အစိတ်အပိုင်းများ မဖြစ်မနေ ဖြစ်လိမ့်မည် သန့်ရှင်း အခမဲ့ မှ ဖုန် burrs နှင့် လက်မခံနိုင် အစိတ်အပိုင်းများ. 2. အင်ဂျင် ချော ဆီ သင့်တယ် ဖြစ်လိမ့်မည် လျှောက်ထားခဲ့သည် ရန် က အင်ဂျင် လျှော နှင့် ပွတ်တိုက် မျက်နှာပြင်များ။
မူပိုင်ခွင့် @ 2019 ကွမ်ကျိုး CHEJU အပို အစိတ်အပိုင်းများ Co. , Ltd. အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်